Ciidamada dowladda oo la wareegay deegaan cusub | Keydmedia
27 September 2020 Ciidanka Kenya oo jaray isgaarsiinta deegaanno ka tirsan Gedo
27 September 2020 Maraykanka oo Soomaaliya u saxiixay heshiis deyn cafin ah
27 September 2020 Sharci ahaanta xil-wareejintii maanta dhacday
27 September 2020 Dulmiga Ciidanka Kenya oo laga diiday Gedo
27 September 2020 Saddex qodob oo Farmaajo uu kula colloobay Warbaahinta!
Ciidamada dowladda oo la wareegay deegaan cusub
Dagaalka oo ka dhacay deegaan 60 KM u jira magaalada ayaa waxaa la wareegay Kumaandooska DANAB.
KISMAAYO, Soomaaliya - Wararka laga helayo deegaan lagu magacaabo Lafaha Ragga oo qiyaastii 60-KM u jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ay halkaas howlgal ka fuliyeen Ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa Kumaandooska DANAB.
Taliyaha Guutada 16-aad ee Kumaandooska Xoogga dalka ee DANAB Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in intii uu socday howlgalka, ay la wareegeen gacan ku heynta deegaanka, islamarkaana Al-Shabaab kaga adkaadeen dagaal ay la galeen.
Sidoo kale, taliyaha ayaa sheegay in ay dagaalka ay khasaaro ku gaarsiiyeen Al-Shabaab oo deegaanka muddo gacanta ku hayay, waxuuna intaas ku daray in ay howlgalka sii wadi doonaan ilaa deegaanada kale ay ka xoreeyaan.
Ilaa hada ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay, waxaana xusid in ay yartahay xogaha laga heli kari aagga dagaalka ka dhacay oo magaalada Kismaayo ka fog.
Dhinaca kale, majiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku aadan guulaha ay Ciidamada dowladda ka sheegteen dagaalka ka dhacay Jubbada Hoose.
Ciidamada dowladda ee ku sugan Jubbooyinka ayaa maalmahaan waday dhaq -haqaaqyo aan sidaas u sii buurneyn, oo ujeedkoodu yahay inay dib u qabsadaan deegaanada ay ku sugan yihiin xoogaga Al-Shabaab.
0 Comments Topics: jubaland kismaayo
Khasaaraha ka dhashay weerarkii Janaay Cabdalla
Warar 7 September 2020 15:38